Saaxiibtinimada iyo marxaladeheed (Q4) :
Saaxiibtinimada iyo marxaladeheed (Q4)
3-Saaxiibtinimada dadka waaweyn.
Saaxiibtinimada waqtigani wax ku kaga duwan tahay kuwi hore isfahan dabeecadeed oo isu so jidaya labada qof, wada socod iyo saamayn ta ay isku leyihiin oo balaadhan, iyo iscawimaad bulsheed.
Saaxiibtimdani waxay si mugleh uga qayb qadataa faya qabka maskaxeed iyo caafimaadka jidheed. Waa mid kaalin weyn ka ciyaarta horumarka iyo isdhexgalka bulshada. Waxa saaxiib lagu yahay isfahan dabeecaded iyo isku mid qaab nololeed,isku aragti iyo ujeedo, saaxiibo kuma aha ciyaarid ama mededaalo sida tan ciyaalka,kumana aha is kooxaysi iyo maaweelo sida tan dhalin yarada.
Qofkasta wuxu leyhy tiraba dhowr saaxiibo ah iyadoo ay aad u koban yihiin saaxibadisa dhabta ah ee ay wax kasta wadagaan iyaado waqtiga iyo mashquul ka aduunyo iyo sidoo kale is aaminaadu ay xadido qofka weyn asxaaptisa.
Mararka qaar waxa dadka waweyn ku adkaata inay helaan saaxiibo goobta shaqada.” Goobaha shaqoyinka waxa ku xeeran jewi tartan ka socdo sidaa darteed dadku waxay qariyaan god-dalooladoda si ay tartanka baaqi ugu sii ahaadan”
Dadka shaqada ku saaxiibaa badana si qoto dheer xogohoodu isuma weydar sadaan waxana adag in la yirahdo waxa halka ka jiri karta saaxiibtinimo dhab ah.
Badi dadkasi waxay qimeyan amaanka maaliyadooda in ka badan saaxiibtinimadood.
Badan kooduna waxay le yihiin celcelis ahaan saaxibo dhab ah ila labo ama ka yar.
Deraasad badan oo la xidhadha dadkas waxay muujinayan in saaxiibtinimada iyo iscaawinadu ay kor u qaado qofka hankisa waa hadi uu mesha ka boxo tartanka iyo iska taxadaridu laguna bedelo is dhex gal iyo saaxiibtinimo dhab ah.
W/Q: siciid axmed
LASOCO QAYBTA XIGTA..
Tags: freindship, saxiib, saxiibtinimada
Previous PostSaaxibtinimada iyo marxaladeheeda Q2aad
Next PostSahan tag
Talooyin wax ku oool ah.